“Rallye international”: hisy mpanamory reonioney | NewsMada
“Rallye international”: hisy mpanamory reonioney
Hotanterahina any Alaotra Mangoro, ao amin’ny alan’ny Fanalamanga, ny 20 – 22 septambra ho avy izao, ny andiany faha-39 amin’ny “Rallye international de Madagascar”, dingana fahadimy amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Hiavaka ity andiny ity satria hisy mpanamory reonioney dimy handray anjara ka eo amin’ny sokajy “junior” ny telo ary “sénior” ny roa vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny federasiona malagasy sy ny ligy. Hisy ihany koa mpanamory malagasy hifaninana amin’ny “Tour auto de la Réunion”, hatao amin’ny taona 2019. Tanjona ny fampifanatonana ny mpanamory zandriny, eo amin’ny fampiroboroboana ny “rallye”, ho an’ny Nosy roa tonta.
Hanana halavana 458, 62 km ity “Rim” ity ary misy dingana manokana “ES” miisa 14 ka ny 10 samihafa, mirefy 205, 92 km. Manana lanjan’isa 2, 0 ity fifaninanana ity.
Hotontosaina amin’ny alina…
Nambaran-dRakotofiringa Jimmy, filohan’ny FSAM, fa ny dingana tsara vitan’ny Fanalamanga, tamin’ny fikarakarana ka nahafahana nanatontosa ny “Rallye Mangoro” farany teo, sy ny fangatahan’ireo mpijery ka nahatonga ny federasiona hanome ny “Rim” hatao any amin’ny faritra Alaotra-Mangoro.
Na izany aza, tsy hitovy amin’ny lalana tamin’ny “Rallye Mangoro” ity “Rim” ity fa nasiam-panovana ary eo koa ireo “ES” vaovao, hotontosaina amin’ny alina, mirefy 7, 37 km, hiverenana indroa. Hirefy 31, 60 km kosa ny “ES” lava indrindra. Hahatratra 50 ny isan’ny mpifaninana. Hifarana ny zoma 14 septambra ny fisoratana anarana. Hanomboka ny 15-19 septambra kosa ny fizaran-dalana ka misafidy andro roa amin’ireo ny mpifaninana tsirairay.